Dhaxal Sugaha Sacuudiga Maxamed bin Salmaan oo iibsaday kooxda Newcastle United horyaalka Premier League | Dayniile.com
Home Warkii Dhaxal Sugaha Sacuudiga Maxamed bin Salmaan oo iibsaday kooxda Newcastle United horyaalka...
Dhaxal Sugaha Sacuudiga Maxamed bin Salmaan oo iibsaday kooxda Newcastle United horyaalka Premier League
Horyaalka Premier League ayaa ansixiyey in Sacuudi Carabiya ay iibsato kooxda Newcastle United, sida lagu sheegay war-saxaafadeed maanta ay soo saareen.
“Premier League, Newcastle United Football Club iyo shirkadda St James Holdings Limited waxay maanta heshiis ka gaareen iibsashada kooxda ee PIF (Public Investment Fund),” ayaa lagu yiri bayaan kasoo baxay Premier League.
Heshiiska ayaa ku kacaya 305 milyan oo pound, wuxuuna hirgalay isla maaanta
PIF waa sanduuqada lacagta dadweynaha ee dowladda Sacuudi Carabiya. Inkasta oo uusan si rasmi ah u magacowneyn, haddana milkiilaha rasmiga ah ee Newcastle ayaa hadda loo arkaa Maxamed Bin Salman maadaama uu yahay ninka ugu awoodda badan dowladda Sacuudiga, islamarkaana sanduuqa PIF uu hoos tago.
Madaxa PIF Yasir Al-Rumayyan ayaa bayaan uu soo saaray ku yiri “Waxaan aad ugu faraxsannahay inaan noqoo milkiilayaasha cusub ee Newcastle United, oo ah mid ka mid ah kooxaha ugu caansan England.”
Heshiiskan ayaa waxa uu hadda kahor burburay 2020 markii Premier League uu ku adkeystay in la kala saaro PIF iyo dowladda Sacuudiga, sidoo kalena Sacuudi Carabiya ay dalkeeda u ogolaato in lagad daawo taleefishinka Qatar ee beIN Sports.
Taageerayaasha kooxda Newcastle ayaa dabbaal-deg ka sameeyey dibadda garoonka St. James Park, ayaga oo ku faraxsan in kooxda laga wareejiyey gacanta milkiile Mike Ashley oo loo arkay nin kooxda la degay oo aan dhaqaale gelin.
Previous articleDawladda Soomaaliya oo sheegtay in duqaymo cusub ay ka dhaceen gobolka Gedo.
Next articlemarkabka Mareykanka ee nuclear-ka xambaarsan oo lagu Weeraray Badda Koonfurta Shiinaha
Marwo Xaliimo Yacquub /Madaxweynaha Singabuur !!.Wax Soo Saarka Dalkeeda Singabuur Sanadkii...
Marwo Xaliimo Yacquub /Madaxweynaha Singabuur !!.Wax Soo Saarka Dalkeeda Singabuur Sanadkii Waa 400 Bilyan oo Doller. Tirada Dadka Ku Nool Waa 6 Malyan. Qofka Singabuur u...
Al-shabaab oo shaacisay magaca iyo Beesha uu ka soo jeedo ninkii...
SIDEE LOO ISTICMALAA BINANCE?
“Aniga iyo aabahay waxaan isku fara-saarnay goob dagaal waxaana ku kala...